Ndị mmadụ na -echekarị ajụjụ ndị a mgbe ha na -azụta sofa ọhụrụ maka ụlọ gị, kedu ụdị nke na -adọrọ mmasị karị, kedu ihe na -adịte aka, sofa akpụkpọ anụ ma ọ bụ akwa nke ka mma? N'ezie, enwere ọtụtụ ihe ị ga -atụle ma mmefu ego, nkasi obi, ịke, wdg ka emechara ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ndụ gị. N'ihe banyere sofa akpụkpọ anụ vs akwa akwa, a ga -ekpebi etu i si ebi na ihe ị ga -ebi. N'ihi ya, anyị na -edepụta isi ihe ndị dị n'okpuru ebe a na -ezo aka ịzụta ezigbo sofa maka ụlọ gị.
Ihe ị ga -atụle mgbe ịzụrụ sofa akpụkpọ anụ na akwa
Mgbe a bịara n'ịkasi ya obi, ọ na -abụkarị nkeonwe dabere na mmetụta onwe onye. Yabụ ihe ị na -eme bụ ịjụ onwe gị, nke na -adị gị mma n'ahụ gị?
Ihe a na -ahụkarị bụ na akwa dị mma karịa akpụkpọ anụ n'ihi na ọ dị nro, dịkwuo mfe, na obere okpomọkụ na-anabata ọnọdụ ụlọ. Mana ọ dabere na akwa akwa yana sistemụ nkwado. N'izugbe, sofas akwa na -eku ume karịa sofas akpụkpọ anụ. Ọ bụrụgodị na ị nọdụ ogologo oge, okpu gị adịchaghị ọkụ, iru mmiri na ngwugwu, nke na -eme ka ndị mmadụ nwekwuo ahụ iru ala ma belata mgbakasị ahụ. Otú ọ dị, otu ihe kwesịrị ịkpachara anya, na ụfọdụ akwa dị ọnụ ala ga -atọpụ wee mepụta ụyọkọ na oche.
Banyere sofa akpụkpọ anụ, ọ na -emetụtakarị ihu igwe. N'oge oyi, sofa akpụkpọ anụ nwere ike ịdị oke oyi karịa imetụ aka ma ọ bụ saịtị, mana ọ bụrụhaala na ị were blanketị n'elu ya ga -ekpo ọkụ ruo nso oke okpomọkụ nke ahụ mmadụ. N'oge ọkọchị, ọbụlagodi na ịnweghị igwe oyi, sofa akpụkpọ anụ dị jụụ karịa akwa nke na -eme ka ịsụsọ gị wee rapara na akpụkpọ ahụ. N'ezie, anyị na-akwado ịwụnye ọnọdụ na-achịkwa ihu igwe, nke na -eweta nkasi obi karịa na ihu igwe.
Na arụmụka nke ọnụ ahịa akpụkpọ anụ vs. akwa sofas, ọ bụrụ na ha abụọ nọ n'otu ụdị, mere na otu mma etiti, akpụkpọ anụ dị ọnụ karịa n'ozuzu ya.
Achọpụtara m ma sofa akpụkpọ anụ na akwa na Wayfair, Nsonaazụ ndị gara aga gosiri ọdịiche ha. Akpụkpọ anụ ahụ dị elu karịa akwa. Mana, enwekwara ụfọdụ akwa okomoko nke ndị nrụpụta ama ama mere nke karịrị ọnụ ahịa akwa akwa akpụkpọ anụ ndị a. Enwekwara ụfọdụ sofas akpụkpọ anụ dị ala dị ọnụ ala karịa akwa ma ọ bụrụ na i chebaraghị nkasi obi na ọdịdị echiche. Ọnụahịa ahụ na -egosipụtakarị ogo na ogologo ndụ nke sofa, yabụ enweghị mgbagha na akpụkpọ ahụ na -adịte aka karịa akwa ma ọ bụrụ na emebighị ya na akpa.
Ya mere, ihe mbụ ị kwesịrị ịtụle bụ mmefu ego, mgbe ahụ ihe ndozi ụlọ, usoro ezinụlọ. Ọ bara uru karịa ịhọrọ sofa akwa nke nwere ike ịchekwa ọkara ụgwọ. Sofas akpụkpọ anụ dabara adaba maka ndị nwere ezigbo ọnọdụ ego ma ọ bụ ụlọ ịnabata ịzụta. Ọ bụ ezie na sofas akwa dị mma maka ezinụlọ oke ma ụdị dị iche iche ma ọ bụ ọnụ ahịa na -agbanwe agbanwe.
Akwa akwa na sofa akpụkpọ anụ nwere ụdị sara mbara na agba ịhọrọ, nke a ga -ejikọta ya na ọnụ ụlọ niile.
N'izugbe, akwa akwa na -enye nhọrọ karịa akpụkpọ anụ n'ihi usoro ha na -egbu mgbu, agba, ụdị, na usoro ime ụlọ. Ọ bụrụ naanị na ị ga -atụkwasị idobe sofa akwa mgbe ahụ mgbe ị na -achọ ụlọ gị ihe ọ bụla ị ga -eche, cuz ị nwere ike chọpụta ụdị na agba ọ bụla iji zute ụlọ ahụ. Ọ ghọọla nhọrọ mbụ maka ọtụtụ mmadụ, Ndị sofas akwa America na -anọchite anya ya bara uru site na nhazi ha siri ike, ọkaibe ihe, imewe sayensị, ihe okike mara mma na nkasi obi sara mbara.
Na ntụle, ihe ndozi ụlọ ole na ole nwere ike dakọtara na sofa akpụkpọ anụ dị oke mma. Ọ bụrụ na ọ dabara maka ime ụlọ ahụ, enwere ike izipu mmetụta ọkaibe. N'ezie ma ọ bụrụ na ọ dabara nke ọma ọ nwere ike igosipụta ọmarịcha pụrụ iche n'ime ụlọ nke siri ike ịmegharị na akwa.. Ihe kacha eji akpụkpọ anụ eme bụ ụdị chesterfield nke bụ ọdịnala. Otú ọ dị, dị ka iwu, sofas akpụkpọ anụ na -adịkarị mma karịa ndị ogbo ha. Ọ bụrụ na -amasị gị ka ị nwee ụdị ọhụụ ma ọ bụ ọhụụ, ọ na-eyi ka ọ na-adị gịrịgịrị ma dị elu karịa ọtụtụ sofas akwa.
Ma sofa akpụkpọ anụ ma ọ bụ akwa, ha niile na -enye ịma mma na ọkaibe n'ụlọ gị, ime ụlọ gị, ụlọ iri nri gị, ma ọ bụ ụlọ ezumike gị. N'ihi ya, ọ na -adabere na nhọrọ onwe onye. Ịchọrọ ka sofa gị bụrụ isi ihe eji eme ụlọ gị? Kedu ụdị ịchọ mma ka masịrị gị, vinteji ma ọ bụ ọgbara ọhụrụ? Ị nwere olile anya na ọ ga -adịrị gị mfe karịa maka ụlọ gị? Nke a bụ ihe anyị ga -atụle mgbe ị na -ahọrọ sofas.
E wezụga nkasi obi, ọnụ ahịa na ụdị, mmezi nwere ike bụrụ isi ihe na -eme ka ị na -ala azụ. Akpụkpọ anụ dị mfe ịsacha ma na -eri obere oge, ebe ọ dị mkpa ka a na -ehichapụ akwa ma na -asacha ya mgbe niile. Sofa akpụkpọ anụ nwere ike ịdịru ọtụtụ iri afọ ma ọ bụrụ na -elekọta ya nke ọma. Otú ọ dị, ebe ekwesịrị ịdobe ya mgbe niile iji gbochie mgbawa na nkewa.
N'ihi njirimara mmiri, ihe ị na -eme bụ ịsacha akwa nhicha ahụ na mmiri dị ọcha, hichaa ya ma hichaa elu sofa. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ maka mmezi ogologo oge ọ chọrọ mmanu pụrụ iche na ịme waksị. Na mgbakwunye, ozugbo sofa akpụkpọ anụ mebiri emebi n'ụzọ anụ ahụ, enweghị ike dochie mkpuchi elu, nke siri ike ijikwa. E wezụga, ụfọdụ anụmanụ dị ka pusi na -eji amachie sofa. N'ọnọdụ mmebi, kwakọta sofa setịpụrụ ma ọ bụ zụta ihe ụmụaka ji egwuri egwu ka pusi dọpụ uche ya. Ekwesiri ighota na sofas akpụkpọ anụ siri ike idobe yana ịkpụcha siri ike nrụzi, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka ma ọ bụ anụ ụlọ n'ụlọ, akwa sofas dị mma karịa.
Banyere akwa, ọ dị mfe ma dịkwa mfe iji dochie. Enwere ike wepu ọtụtụ n'ime akwa sofa akwa ma saa ya. Ọ bụrụ na ị chere na ọ na -esiri gị ike ịnagide akwa a rụrụ arụ, ị nwere ike wepụ ya ma zigara ya onye na -ehicha ihe. Ọ bụrụ na ị na -echegbu onwe gị maka okpomoku naanị tinye akwa ahụ mgbe oge ọkọchị na -abịa were dochie akwa oyi n'oge oyi. Otú ọ dị, akwa akwa a ga -eji akwa ma yie nke dị gịrịgịrị na iji ya eme ihe, ya mere ịhọrọ sofa dị elu nwere ike belata ihe egwu.
Akwa sofa na -abụkarị silk, satin, hemp, corduroy na ihe ndị ọzọ na-eguzogide ọgwụ. Per nwere atụmatụ nke ya. Sofa sofas silk na -egosi ịdị mma na okomoko, na -enye ndị mmadụ mmetụta dị ebube. Otú ọ dị, sofas hemp na corduroy na -adịwanye arọ na kpochapụwo, o yikwara ka ọ na -etolite ụdị okike na mfe.
Nhọrọ maka ihe sofas akpụkpọ anụ buru ibu, kwa. Akpụkpọ anụ dị iche iche na -emepụta mmetụta dị iche iche kpamkpam. A na -elekwasị anya na sofa akpụkpọ anụ, elasticity eke, na ike nke cowhide, elu siri ike, akwa ngwa ngwa agba, ezigbo elasticity, ikuku ikuku, na ike n'ibu dị elu. Nke kacha pụta ìhè bụ ike akwa ya dị elu na ike ndọda nke na -eme ka ndụ sofa akpụkpọ anụ ka mma. A na -ekekarị ha n'ụdị abụọ, akpụkpọ anụ dị gịrịgịrị ma ọ bụ sie ike. Nhazi nke sofa akpụkpọ anụ dị gịrịgịrị na -anọchite anya ụdị dị mfe ma na -enwu gbaa.
Sofas akpụkpọ anụ dị elu dị nro iji metụ aka, ntụsara ahụ ịnọdụ ala, na -ekpo ọkụ n'oge oyi ma dị jụụ n'oge ọkọchị. N'ihi ihe ka mma, ọnụ ahịa ya dị oke ọnụ karịa akwa. Enwere ụdị sofas dị iche iche nke ha niile na -enye ndị mmadụ mmetụta dị iche iche. Sofas sitere na akwa silk na -eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta dị mma, na sofas nke hemp na -adị mfe. Site na nlele ihe, sofas akpụkpọ anụ na -adịte aka.
Enwere eziokwu na anyị na -elegharakarị anya na sofas akpụkpọ anụ bụ n'ezie hypoallergenic. Ọ bụrụ na mmadụ nwere nfụkasị gburugburu ebe obibi, mgbe ahụ nke a nwere ike bụrụ ihe na -abaghị uru ma ọ bụrụ na sofa dị mma. N'adịghị ka sofa akwa, sofas akpụkpọ anụ na -ọnyà obere ntụ ntụ, dander na -atụ egwu, na allergens ndị ọzọ, nke nwere ike ibute allergies. Yabụ, jiri ya tụnyere sofa akwa ahụ nyere akwa ọkụ maka ihe nfụkasị ahụ iji kpochapụ sofa akpụkpọ anụ yiri ka ọ bụ nhọrọ ka mma. N'ezie, ọ gaghị ekwe omume idobe sofa na -enweghị ihe nfụkasị, mana ọ ga -efu oge karịa ma were mbọ karịa ihe ndina akpụkpọ anụ n'ụzọ dị ogologo
Ndị a bụ ajụjụ na -enye aka ịjụ onwe gị mgbe ịzụrụ akwa ma ọ bụ sofa akpụkpọ anụ:
Ị nwere anụ ụlọ ọ bụla? Anụ ụlọ gị bụ nwa ọhụrụ gị? Anyị na-akwadokarị akwa maka ndị nwere anụ ụlọ ebe ọ bụ na ha nwere ike jiri ọnya ha kpụọ akpụkpọ anụ dị oke ọnụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụ onye nkuzi maara ihe na anụ ụlọ, mgbe ahụ ha abụọ dị mma.
Ị nwere ụmụaka? Ha na -enwekarị ihe ọghọm nke ụdị ọnyá niile? Ha na -egwu egwu mgbe mgbe n'elu sofa? Ọ bụrụ na ee niile, tụkwasa m obi, akpụkpọ anụ ahụ nwere ike ijere gị ozi ogologo oge ma e jiri ya tụnyere akwa. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ụzọ ọ bụla iji zere ọchịchị aka ike nke ụmụaka, atụmatụ njikwa mmebi dị mkpa.
Sofa gị ga-abụ enyi ogologo oge nke kwesịrị igosipụta ụdị mgbanwe gị na ijikwa mkpa izu ike gị. Ọ bụ ezie na ịhọrọ akwa vs. sofa akpụkpọ anụ (ma ọ bụ nke ọzọ) nwere ike iyi nhọrọ mara mma, ọ ga -emetụta ogologo ndụ nke otu ibe n'ụlọ gị. Ihe dị mma anyị nwere oke nhọrọ n'aka.
Etu ị ga -esi lelee mgbe ịzụrụ sofa akpụkpọ anụ na akwa
1. Lelee ihe eji eme ụlọ n'èzí nke ọ ga -adigide. Gbaa mbọ hụ na enweghị nshịkọ na mpịachi na -adịghị mma iji metụta ọdịdị ahụ.
2. Ala dị n'elu sofa kwesịrị ịdị larịị, na -ejighị nko, mbọ na -apụ apụ, ma ọ bụ staples, nke ga -emerụ ndị mmadụ ahụ na akwa dọwara adọka.
3. Ọ bụrụ na ị metụrụ metal ma ọ bụ osisi etiti, ka na -eche akụkụ dị adị nke pụtara na mkpuchi mkpuchi dị mfe iyi na obere oge, karịsịa n'akụkụ ọnọdụ ịnọdụ ala.
4. Hụ ma usoro a dabara nke ọma, a na -agbatịkwa akwa ndị a na -eji achọ mma.
5. E kwesịghị ịkwusị kwushin na nsọtụ ihu nke oche ahụ. Njikọ kwesịrị ịdị warara ka o kwere mee n'etiti kwushin, ogwe aka, azụ azụ, na sofa.
6. Lelee ma ogwe aka na oche sofa kwụsiri ike, elu osisi dị larịị. Kwushin ahụ ga -enwerịrị nkwado zuru oke ma kwekọọ na sofa azụ.
7. Sofa akpụkpọ anụ na -enwekarị mmekpa ahụ chromatic na -adịghị ahụ anya, ọbụna obere ntụpọ, ya mere leba anya na agba akpụkpọ anụ gbara gburugburu ebe ọ bụla.
Ụdị akwa akwa na ụdị akpụkpọ anụ
Ọtụtụ ndị na -azụ ahịa nwere ike ha agaghị amụta ụdị akwa akwa na akpụkpọ anụ nke na -enyekwa aka ịhọrọ akwa ma ọ bụ akpụkpọ anụ. Ụdị akwa akwa akwa bụ eriri eke ma ọ bụ eriri mmadụ mere. Nke a bụ mmeghe dị mkpirikpi maka eriri akwa ị ga -ahụ mgbe ị na -eche nhọrọ akwa dị iche iche.
Akpụkpọ anụ sitere n'okike bụ ihe na -aga n'ihu na -esite na osisi ma ọ bụ anụmanụ. Ha na -adịkarị nro, mara mma icho mma na obi uto, dị mfe imetụ aka. Enwere eriri eke anọ dị ka atụmatụ dị n'okpuru.
Nọgidenụ na -ekpo ọkụ ma na -ekpo ọkụ; Na -adịgide adịgide, ibu karịa textiles ndị ọzọ; Nkịtị na unyi na -eguzogide; Yiri agba dị mfe, ịjụ oyi na -eguzogide; Antibacterial, na -eguzogide isi
N'elu dị larịị, dị nro ma ọ naghị amị amị; Nlekọta anụ ahụ na ntutu n'ihi albumen cellular eke; Agba na -ebipụta nke ọma; Ọsụsọ na -eme ka ike gwụ ya, anyanwụ, ncha; Na -eguzogide ala, mildew, na nla; Achọrọ nlekọta pụrụ iche, nhicha nhicha
Nkasi obi na iku ume; Akpụkpọ anụ sitere na kemịkal.; Hypoallergenic na anaghị akpasu akpụkpọ ahụ iwe.; Mmeghari ohuru na biodegradable.; Ịsa igwe.; Na -adị ngwa ịbelata na ịsụ ọnụ nke ukwuu.; Eriri anụ ahụ na -ada ngwa ngwa
Eriri eke nwere mmetọ gburugburu ebe obibi dị ala; Na-arụsi ọrụ ike iji rụpụta; Dị ka o kwesịrị, ịchụpụ ụmụ ahụhụ; Na -adọta mmiri nke ọma - ruo 20% nke ịdị arọ ya; Ịdị jụụ pụrụ iche na ịdị ọhụrụ na ihu igwe na udu mmiri; Hypoallergenic, dabara maka akpụkpọ anụ ma ọ bụ allergies; Mmetụta site na mildew na ajirija; O siri ike iwepu creases
Mmadụ mere eriri
Ọ bụ mmadụ mere eriri sịntetịkị nke mmadụ mere site na njikọta kemịkal, na -emegide eriri anụ ahụ nke sitere na ihe ndị dị ndụ. Ha gụnyere nylon, polyester, acrylic, polyolefin vinyl, wdg. Nke a bụ atụmatụ nke ụdị eriri mmadụ mere.
Na -eguzogide ịgbatị na ibelata; A pụrụ ịsacha ya ma ọ bụ nkụ; Nlekọta dị mfe ka ọ na -eguzogide ịkpa agwa, na -adakpọ.; Na -eguzogide ọtụtụ kemịkal; Ọ gaghị amị amị mmiri ma ọ bụ rie mmiri; Static na pilling nsogbu; Mpekere mmanụ siri ike iwepụ; Enweghi gburugburu ebe obibi
A na -emepụta ya site na agbaze pellets plastik, nke na -ere ọkụ nke ukwuu; Akwa ike ọdụdọ; Na -adịgide adịgide, na -eguzogide nsị; Ezigbo oke na mkpuchi; Na -ejide agba ya ; Njirimara njikọta adịghị mma, ike agba; Akụrụngwa nwere ike igosi mmebi
Fechaa, adụ, na -ekpo ọkụ, aka yiri ajị; Nwere ike iicomi eriri ndị ọzọ, dị ka owu; Agba agba na agba na -enwu gbaa; Onye na-abụghị allergenic; Na -eguzogide nla, mmanụ, kemịkal, ìhè anyanwụ; Na -adọpụ mmiri n'ime ahụ ma bụrụ nke a na -asachapụ; Na -ata ahụhụ site na mfu na nsogbu abrasion
Siri ike ma tụọ obere karịa eriri ọ bụla ọzọ a na -ejikarị; Kacha agbatị ihe ; Ukwuu mmiri absorbent, na -eku ume.; Ukwuu na -eguzogide abrasion, ebu, mildew na wrinkling; Saa mfe, ma na -eguzogide mmiri na -awụfu.; Mmetụta anyanwụ na, odo na afọ; Nguzogide mmanụ na ọtụtụ kemịkal; obere ọkụ na ebe mgbaze
Cellulose dị ọhụrụ
Eji agba agba n'ụzọ dị mfe ma na -emepụta agba ndị doro anya
Emebere ya ka ọ dị ka silk, ajị anụ, ma ọ bụ owu
Ezigbo, inogide ma dịkwa ọnụ ala
Enweghị nsogbu static ma ọ bụ mbadamba
A na -ejikarị ya agwakọta
Ọ na -adị mfe ịre mmiri ọ gwụla ma esiri ya esp
Na -enwe mmasị ịmịkọrọ mmiri mmiri, mmanụ ahụ, na mmiri
Conductive ngwa iji n'oge oyi oge
Na -ejikọta na ụdị ihe ndozi dị iche iche
Soft na nwere okomoko anya
Yiri ngwa ngwa n'iji ya
Ukwuu na -etinye uzuzu
Sofa akpụkpọ anụ na akwa - ngwakọta zuru oke maka ụdị ọ bụla
N'agbanyeghi inye otutu aro, Echere m na mmadụ ka na -eche na ọ na -esiri ya ike ikpebi nke ka mma ịga maka akpụkpọ anụ ma ọ bụ akwa. N'ebe a, anyị ga -egosi ezi echiche ọzọ ịnwe ma n'ime ụlọ gị ma gwakọta sofa akpụkpọ anụ mara mma na akwa ga -adabara ime gị n'ụzọ dị ebube..
Ma sofa akpụkpọ anụ na akwa jikọtara ya na ime ime ime obodo na Mediterenian, na -etinye ederede bara ụba ma dịkwa larịị, na -anọpụ iche na -anọpụ iche na mmetụta nke ikpo ọkụ. Sofa akpụkpọ anụ bụ ụdị arịa ụlọ mara mma nke ejikọtara ya na okomoko na mkpụrụ osisi. Ihe eji akwa akwa, n'akụkụ aka nke ọzọ, na -enye nkasi obi nkịtị, ịhụnanya na mmetụta ụlọ. Ozugbo agwakọta ha n'ime ime ime, ihe mkpuchi sofa akpụkpọ anụ na akwa ga -egosipụta ọmarịcha anya nke yiri ka ọ na -anabata ndị ọbịa ileta. Ohiri isi dị nro na ụda dara ụda bụ mgbakwunye zuru oke na sofa. Ụdị okooko osisi na sofa mara mma nke sofa na -atọhapụ ọmarịcha ọzọ na -achọ mma n'ime. Weregodị ya na ị nọ ọdụ n'akụkụ ọkụ wee na -anụ ụtọ nkụ osisi na ịgba ọkụ na -agba. Ọ gaghị abụ ihe mara mma na ezigbo udo nke ime?
Sofa akpụkpọ anụ na akwa, ọ bụ ezie na ọ na -abụkarị maka ụdị omenala ndị ọzọ, anyị achọtala ọnọdụ ha ruru eru n'ime ime ụlọ ọgbara ọhụrụ. Ahịrị kwụ ọtọ na kehoraizin, agba na -adabara na iche na -egosipụta ihe pụrụ iche ọgbara ọhụrụ, nke bụ ọhụụ ọhụụ nke sofa nke oge a. A na -elekwasị anya na agba agba na agba ojii, dị ọcha, nevi blu, ma ọ bụ ngwakọta nke ngọngọ agba ndị a, yana agba ntụ na -ewu ewu. Grey dị ka nke ọma jikọtara ya na oji ma ọ bụ ọcha. Ihe mkpuchi akpụkpọ anụ na akwa na -enye nkasi obi na ụdị pụrụ iche mana ọ bụghị ihe ijuanya ma ọlị. Sofas akụkụ mara mma ma ọ bụ sofas nkuku bụ oghere maka ndị ọbịa na ezinụlọ gị, nke na -agwakọta n'ụzọ dị mfe na ime ime dị ugbu a na nke pere mpe. Ohiri isi ndị e ji achọ mma na -egosipụtakarị otu agba ma ọ bụ ndo dị ole na ole nke otu agba na -enweghị usoro ịchọ mma. Sofa akpụkpọ anụ na akwa nwere ụdị ọgbara ọhụrụ pụtara ka ọ bụrụ isi ihe dị n'ime ụlọ na ibe mkparịta ụka. Nhazi modular na -enye mgbanwe iji megharia oche dị ka mkpa gị si dị.
Sofa bụ ebe dị mkpa n'ime ụlọ niile ebe ị na -ewepụ nchegbu, ike ọgwụgwụ na ọnọdụ ọjọọ. Ọ bụ ebe na -eme ihe na -atọ ụtọ ma na -ekpo ọkụ kwa ụbọchị. Ekwenyere m na ọ siri ike ịhọrọ sofa akpụkpọ anụ ma ọ bụ akwa n'ọtụtụ puku ụdị. Otú ọ dị, azịza ya edoghị nke ka mma na ọ dịịrị gị na ezinụlọ gị. Ọ bụrụhaala na ọ na -emezu ihe ị chọrọ ma na -eme mgbanwe maka ihe ndozi ụlọ, nke ahụ ga -abụ ihe na -atọ ụtọ ịhọrọ.
Oge ezipụ: 2020-11-27